Klopp oo ka hadlay Guusha Liverpool ee Brenford iyo Dulqaadka Kooxdiisa ee kulankan. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Klopp oo ka hadlay Guusha Liverpool ee Brenford iyo Dulqaadka Kooxdiisa ee...
Klopp oo ka hadlay Guusha Liverpool ee Brenford iyo Dulqaadka Kooxdiisa ee kulankan.
Jurgen Klopp ayaa amaanay dulqaadka iyo rabitaanka ay muujiyeen Liverpool intii lagu jiray cayaartii 3-0 ku dhamaatay ee ay ka gaareen Brentford.
Goolal ay kala dhaliyeen Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain iyo Takumi Minamino ayaa Reds ka sare mariyey Chelsea si ay u soo galaan kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Inkasta oo boqolkiiba 74 ay ku raaxaysanayeen kubad haysashada isla markaana ay diwaan galiyeen 12 darbo ka hor inta aan la aadin nasashada, kooxda Klopp waxa ay ahayd in ay u samraan guulihii ay ka gaadheen kulamadii adkaa ee ka dhacay Anfield.
Goolka koowaad Waxa uu yimid wax yar ka hor qeybta nasashada iyadoo Fabinho uu madax ku dhaliyay kubad koorno aheyd oo uu soo qaaday Trent Alexander-Arnold, waxayna heleen faa’iidooyinkooda ka dib markii ay labo gool ku dhaliyeen sideed daqiiqo gudahood.
Klopp ayaa ku farxay sida ay ciyaartoydiisu ula qabsan lahaayeen caqabadaha ay shinidu keentay.
“Aad bay u dhib badan tahay inaad ka hortimaado Brentford, run ahaantii,” Klopp ayaa u sheegay BBC Sport. “Caadi ahaan si kala duwan ayay u ciyaaraan, laakiin qaabka ay nooga soo horjeedaan waa mid aad u adag.
“Waxaa jiray waqtiyo aad u badan oo kubada ay hawada ku jirtay iyo xiliga ay dhulka ku jirtay, waxay ahayd inaan bilowno ciyaarista kubada cagta.
“Waxaad u baahan tahay dulqaad, ma lumin kartid diiradda ama ma lihid. Waa inaad ku sugnaataa rabitaan buuxa xitaa marka aanad helin jihada. Waxaan ku qasbanahay inaan dhinac u beddelno, u ciyaarno si degdeg ah iyo dhammaan arrimahan oo kale. Runtii waan maamulnay qeybtii labaad.”
Fabinho ayaa kubad la soo booday isagoo dhaliyay goolkiisii ​​seddexaad ee kulamo badan uu dheelay, isagoo labo gool dhaliyay kulankii FA Cup ee ay ka badiyeen Shrewsbury Town isbuucii hore.
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimaha cusub ee Madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan oo dhawaan Madaxweyne Xasan Sheekh uu...
Lafta Gareen oo xilka qaadis iyo magacaabis sameeyey
Maxay Hindiya ka tiri kororka weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya?
Sadio Mane oo Wali Doonaya inuu ka tago Liverpool.
Muxuu noqon karaa go’aanka Aadan Madoobe ee Xildhibaanada Ceelwaaq iyo Garbahaareey...
Deg deg Guudlaawe oo Qalqal amni dareemaya, Xaalada Beledweyne 26/03/2022
Shariif Xasan oo loo diiday inuu u safro Baydhabo
Karim Benzema oo Dagay Quluubta Shacabka reer Farance Codna ka helay...